Sida Loo Helo Gaadiidka Gudaha Google Analytics - Talobixin kooban
Dhismaha Google Analytics (GA) Warbixinnada caadada ah waa shuruud ah in la helo aragtida qoto dheer ee dabeecadaha booqdaha goobta iyo falanqeynta wanaagsan ee taraafiga. Dhibaatada guud ee ka timaadda dadka isticmaala internetka ee falanqaynta cusub sida sida looga saaro taraafikada xafiisyada iyo ka soocista Magaalada / Waddanka ama IP si loo eego taraafikada faa'iidada leh ee bogga internetka. Khubarada internetku waxay xusuusinayaan in dadka ugu culus ee goobtu ay u muuqdaan inay yihiin shaqaale urur. Sidaas daraadeed, waxa macquul ah in la baabi'iyo kooxdan isticmaalayaasha ah ee gawaarida Google Analytics si looga fogaado in ay soo rogaan tirooyinka wakiilada martida internetka. Macluumaadka goobtu sidoo kale waxaa laga dhigi karaa dadka isticmaala goobta dhexdeeda waxayna keenaan saameyn waxyeello ah oo ku oolinaysa is-beddelidda qiyaasta. Google Analytics waxaa loo arkaa in uu yahay qalab aad u caqli badan oo farsamaynaya ficilada laga reebo macluumaadka faylka.
Qodobkan, Lisa Mitchell, oo ah khabiir ku xeeldheer Semt , wuxuu qeexayaa habka looga baxo
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan cinwaanada IP
Google Analytics (GA) wuxuu ururiyaa oo kaydiyaa macluumaadka ku saabsan booqasho kasta oo website ah. Inkasta oo cinwaanada IP aysan soo bandhigin macluumaadka shakhsiyeed ee ku saabsan booqdaha goobta, waxay diiwaan geliyaan cinwaankooda IP-ga oo la heli karo (dadweynaha). Cinwaanka kasta oo internetka laga heli karo ee internetka waa mid u gaar ah oo sharaxaya router kaas oo ah sanduuq ku yaal shabakada internetka ee booqdaha goobta kaas oo isku xiraya kiniinadooda, telefoonada smart, iyo kombiyuutarada internetka..
Inta badan ganacsiyada yaryar iyo xiriirka gudaha ee gudaha gudaha waxay leeyihiin cinwaanno IP ah oo firfircoon. Waxay tusineysaa in cinwaanadu si isdaba joog ah u baddalaan. Mabaadi'da, macaamiisha badeecadda oo badan iyo ganacsiyada intooda badani waxay leeyihiin nidaamyo lagu qoondeeyey cinwaanada IP (kuwa aan caadiga ahayn). Sidaa daraadeed, in la baabi'iyo gaadiidka gudaha GA, user waa inuu ogaadaa nooca IP cinwaanka loo isticmaalo ururadooda.
Gaadiidka ka socda waaxaha gudaha sida shaqaalaha ku soo booqda barta internetka ama xitaa booqashadaada waa in laga saaraa si aad u hesho xogta Google Analytics oo macquul ah. Ka-saarista IP-ga waxaa lagu sameeyaa Google Analytics, waana inuu isticmaalaa dhammaan liiska IP-yada ay rabaan in laga saaro. Milkiilayaasha guryaha waa inay sidoo kale ogaadaan in shaandhooyin badan lagu abuuri karo hal shay oo ah xaalado ah in cinwaano badan laga reebo.
Dalalka Google / Google Analytics Diiditaan
Si la mid ah badeecada ka saarista IP-ga, qofku wuxuu rabi karaa inuu ka saaro baabuurta magaalad ama wadan si falanqeyn aad u fiican. Sidaa daraadeed, user ayaa dhisi kara filter kaas oo baabi'iyo taraafikada ka timid quruumaha gaarka ah ee adduunka. Marka laga reebo waddan, hal joojin hits oo ka yimid magaalooyinka ama magaalooyinka laga reebay in ay qayb ka yihiin gaadiidka Google Analytics. Dal ama magaalo ayaa laga saari karaa hal sabab weyn - si looga hortago haraaga spam. Tusaale ahaan, Hindiya (Shiinaha ama Shiinaha) waa ka saaritaan Google Analytic oo ka hortagaya taraafikada Hindiya iyo Shiinaha, marka laga reebo raadinta taraafiga.
Farsameynta lacagta taraafigga ah waa farsamooyin kale oo lagu helo macluumaad dheeraad ah oo laga helo degaanka la beegsado. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ku qorto macluumaadka aad doorbideyso intaad ololaha xayeysiinta ee lacag bixinta ku siinin goob suuqa lagu barto. Marka la eego, milkiilaha goobta ayaa go'aan ka gaadhi kara sida gaadiidka raadinta ee lacagta loo adeegsado ay u isticmaali doonaan goobtooda oo ay u guuraan iyada oo loo marayo channel-beddelaad Source .